एक्युपञ्चर एक नयाँ आयाम
एक्युपञ्चर अर्थात सुचीवेध चिकित्सा परम्परागत चिनीयाँ चिकित्सामा आधारित २५०० वर्ष पुरानो अनुभवमा आधारित आयन्त प्रभावकारी तथा साइड इफेक्ट रहित उपचार पद्घति हो । एक्युपञ्चर एक्यु अर्थात सीयो र पञ्चर वेध दुई शब्दहरु मिलेर बनेको छ । यसर्थ एक्युपञ्चर को अर्थ शरीरका विभिन्न बाहिरी भागहरुमा सियोद्वारा वेधन गरी गरिने उपचार पद्घति भन्ने वुझ्नु पर्दछ । पहिले पहिलेका मानिसहरु शरीरका कुनै अँगको दुखाई भारीपन कम गर्नको लागि विभिन्न आकारका ढुङ्गाहरुको प्रयोग गर्दथ्यो । ढुङ्गााको सहायताबाट शरीरका विभिन्न भागहरुमा मालिस गर्ने, प्रेसर दिने गर्दा दुखाई आदि कम भएको महसुस गरे । पछि मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै मानिसहरुलाई जनावरका हड्डी, बाँस, धातुको विभिन्न औजारहरु बनाई प्रयोग गर्न थाले । अहिले कपालका रौं जस्ता अति पातला स्टेनलेस स्टिलका सियोहरुको सहायताबाट बिरामीका छालामा अवस्थित विशेष प्वाइन्ट वा विन्दुहरुमा वेधन गरी मानव शरीरका विभिन्न प्रणालीहरु जस्तै रक्तवह प्रणाली, मस्तिष्क स्नायु प्रणाली, लिम्फयाटिक प्रणालीहरु जस्तै रक्तवह प्रणाली, मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, लिम्फयाटिक प्रणाली आदिलाई उत्तेजित गर्दै रोग निको पारिन्छ…
पोलीसिष्टिक ओवैरियन सिण्ड्रोम एवं मोटापा
Dr. Prativa Tripathi
पोलीसिस्टिक ओवैरियन सिण्ड्रोम युवती एवं किशोरीहरुमा सबैभन्दा ज्यादा हुने अन्तःस्रावी ग्रन्थि को समस्या हो । प्रायः ५–१० % युवतीहरु प्रजनन उमेरमा (१५–४५वर्ष) यो समस्याले प्रभावित हुन्छन् । निःसन्तान एवं महिनाबारीमा गडबढि गराउने प्रमुख कारणको रुपमा पनि यसलाई चिनिन्छ । हर्मोनको असन्तुलनको कारणले मुख्यतः यो समस्या हुनेगर्दछ । आयुर्वेद अनुसार यसलाई कफज व्याधि मानिएको छ । आर्तव धातुको विकृति र आर्तवलाई गर्भाशयबाट सञ्चार गर्ने आर्तववह श्रोतसको खराबीको कारण यो समस्या हुन्छ । विशेष गरि निम्न प्रकारको असन्तुलन हुन सक्दछ । हाइपोथैलमस : पिट्युटरी ओवेरियन एक्सिसको कार्यमा असन्तुलन । वंशाणुगत रुपमा रक्तमा इन्सुलिन तत्वको मात्रा असन्तुलन भएमा । शरीरमा एण्ड्रोजन नामक हर्मोन ज्यादा भएमा । आधुनिक जीवनशैली : आधुनिक जीवनशैलीको कारण विशेषतः महिलामा खानपान एवं जीवनशैली प्रभावित छ । रात्री जागरण, दिवा सुत्ने, बासी खाना, मिसावटयुक्त खाना, ज्यादा क्यालोरी युक्त, मल मूत्र आदिको वेग रोक्ने, व्यायामको कमि को कारण कफ दोषलाई दुषित गर्दछ र मेद धातुलाई पनि वृद्घि गर्दछ र PCOS लाई…
रिउम्याटिक (आमवातजन्य) रोगहरुको परिचय, वर्गिकरण, निदान र चिकित्सा
Dr. Pradeep Kc
रिउम्याटिक शब्द युनानी भाषाको ‘रिउमा’ बाट बनेको छ जसको अर्थ “पानी झैं बग्ने” हुन्छ । शरीरभित्र “पानी झैं बग्ने” वस्तुहरुबाट उत्पन्न हुने दुखाई र शोथजन्य रोगहरुलाई रिउम्याटिक रोग भनिन्छ । आयुर्वेदका ग्रन्थहरुमा यी रोगहरुको लागि आमवात भन्ने शव्दको उल्लेख भएको पाईन्छ जसको अर्थ ‘आम’ वा अपक्व रस (रगतमा भएका विषाक्त वस्तुहरु जस्तै टोक्सिन, अखाद्य पदार्थ र औषधिहरुको अवशेष, रोगप्रतिरक्षाबाट शरीरभित्र उत्पन्न भएका जटिल पदार्थहरु आदि) बाट ‘वात’ वा शरीरका मांसपेशी, जोर्नीहरुमा विच्छीदंशवत पिडा हुनु , सुन्नीनु वा रातो हुनु भन्ने बुझिन्छ । अतः रिउम्याटिक रोगहरु भन्नाले आमवातजनित रोगहरु भन्न सकिन्छ । सामान्यतया आमवातजन्य (रिउम्याटिक) रोग भन्नाले शरीरका मांसपेशीहरु, जोर्नीहरु र अन्य कोमल तन्तुहरुमा पीडा वा शोथ भएर उत्पन्न हुने रोगहरुलाई जनाउँछ । यी रोगहरुमध्ये धेरैजसो रोगहरु शरिरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामाथि आफ्नै शरीरले अनेक प्रकारका प्रतिरक्षी पदार्थहरु बनाएर शरीरका विभिन्न कोष र कोष–अवयवहरुलाई नष्ट गरी वा कोषहरुको कामलाई निष्कृय पारी उत्पन्न हुने गर्छन । पहिले पहिले यी रोगहरुले मांसपेशी–हड्डी–जोर्नीहरुलाई मात्रै असर गर्न…
तमक श्वास (Bronchial Asthma)
हाम्रो शरीरको प्राणवह स्रोतस (Respiratory System) अन्तर्गत मुख्यत श्वास नलिका र फोक्सोलाई प्रभाव पार्ने व्याधिको रुपमा तमक श्वासलाई लिइन्छ । आधुनिक चिकित्सा अन्तर्गत यस रोगलाई (Bronchial Asthma) सँग सानिध्य मानेर विवेचना गर्न सकिन्छ । तमक श्वास रोग श्वास रोगको विभिन्न पाँच प्रकार महाश्वास, उध्र्वश्वास, तमक श्वास र क्षुद्राश्वास मध्येको एक हो । विशेषत हाम्रो उरः प्रदेश (छातीमा) अवस्थित कफको विकृतिका कारण प्राणवायुको मार्गमा अवरोध भई श्वास प्रश्वास प्रकृयामा कठिनाई उत्पन्न हुने समस्यालाई समग्रमा तमक श्वासको रुपमा लिन सकिन्छ । प्राणवह स्रोतमा अवस्थित कफ र वायुलाई विकृत गर्ने कारणहरुलाई नै यस रोगको निदानको रुपमा लिइन्छ । आयुर्वेदीय मतानुसार तमक श्वासको दुई अवस्थाहरु हुन्छन् । १. सन्तमक : यस अवस्थालाई श्वासरोगको त्यग्तावस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । रोगले उग्ररुप लिएको खण्डमा रोगी तमः प्रवेश गरी मूच्र्छा समेत पर्न सक्छ । आधुनिक मतानुसार यसलाई क्तबतगक ब्कतजmबतष्अगक सँग तुलना गर्न सकिन्छ । २. प्रतमक : तमक श्वासको रोगीलाई ज्वरो आएर संक्रमणको लक्षण देखिएमा यसलाई प्रतमक…
Mr. Ek Narayan Dhakal
स्वास्थ्य सवैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण सम्पति हो । सर्वप्रथम ओजस आयुर्वेद हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लिको प्रथम वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक मगंलमय शुभकामना साथै उत्तरोउत्तर सफलता र प्रगतिको कामना गर्दछु । म विभिन्न समस्याहरुबाट ग्रसित र एलोपेथिक उपचारबाट पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा एउटा होलिस्टिक (समग्र) उपचारको खोजिमा थिए । उपचार गर्नु एउटा पाटो हो भने शरिरलाई पूर्ण रुपमा सफा गरि औषधि सेवन विना उपचार अर्थात पूर्ण ताजगि गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यसै दौरान मा मेरो ओजस आयुर्वेद हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लिसगँ संपर्क स्थापित भयो । मैले ओजसको सल्लाह अनुसार इनप्यासेन्टको रुपमा बसेर पञ्चकर्मा गरें, जसबाट आखा खुल्यो कि आयुर्वेदमा केहि छ जुन समग्र स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ । आज ओजस मेरो परिवार बन्न पुगेको छ, आयुर्वेदिक उपचार, पञ्चकर्म सेवा, कुशल व्यवस्थापन, स्तरिय सेवा र पारिवारिक वातावरणका कारण । यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा राख्नैपर्ने हुन्छ, पञ्चकर्म र यससगँ सम्बन्धित अन्य उपचार अस्वस्थ व्याक्तिले मात्र लिनुपर्छ भन्ने होईन,…
अर्गानिक खाद्यान्नबाट खाँदा निरोगी भइन्छ ?
विषय प्रवेश अर्गानिक खेती प्रविधिबाट उत्पादित खाद्यान्नहरु नै अर्गानिक खाद्यान्न हुन् जसमा आधुनिक अप्राकृतिक रसायनहरु किटनासक औषधि, रासायनिक मलहरु प्रयोग गरिएको हुँदैन । यस्ता खाद्यान्नहरु प्रसोधनका लागि परावैजनिकिरण, औद्योगिक घोलक र रासायनिक खाद्यमिश्रण (food additives) को समेत गरिएको हुँदैन । सन् १९४० को दसकमा औद्योगिक खेतीको सुरुवात भएदेखि नै अर्गानिक खेतिको सुरुवात गरिएको हो । एकातिर खेतिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न अप्राकृतिक रसायनहरुको प्रयोग गर्न थालियो भने अर्कोतिर त्यसबाट हुनसक्ने प्रतिकुल स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न सचेत मानिसहरु अर्गानिक खेतिको आवाज उठान गर्न थाले । अमेरिका, क्यानडा, जापान, युरोपियन युनियन तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस्ता अर्गानिक खाद्यान्नको ब्यापार गर्नका लागि प्रमाणपत्र जारी गरी प्रमाणित अर्गानिक खाद्यान्नको स्तरियता निर्धारण गरेका छन् । अति कम विकसित र अविकसित राष्ट्रहरुमा दैनिक खाद्यान्नको पर्याप्तता नभएकोले खाद्य आपूर्तिको लागि औद्योगिक रसायनहरुको प्रयोग गरी अत्यधिक उत्पादनमा जोड दिइएको हुन्छ । उत्पादनमा मात्र ध्यान दिईँदा उत्पादिन बस्तुको गुणस्तरमा ध्यान नपुगेकोले खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता ओझेलमा पुगेको छ । कुनै…
Dr. Shanker Prasad Paudel
आजको व्यस्त समाजमा गुदागत रोगहरु दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको पाइएको छ । किनकी आरामदायी जीवन बिताउनु ( Sedantory life style ) असमयमा र नचाहिने तयारी किसिमका खानेकुराहरु खाने बानी लामो समय सम्म एकै रहनु, लामो समय सम्मको मानसिक तनाब ( Anxiety and depression ) मुख्य कारणहरुमा पर्दछन् । माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा पाचन प्रणालीको शक्तिमा ह्रास आई कब्जीयत (constipation) हुन जान्छ । जसको फलस्वरुप गुदागत रोगहरु उत्पन्न हुन्छन् । ती गुदागत रोगहरु मध्यमा पनि क्षारसुत्र द्वारा मात्र उपचार गरीने रोगहरु अर्श र भगन्दर (piles and fistula) को वारेमा संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ । क्षार कर्मको परिभाषा :– क्षारको प्रयोग द्वारा मात्र शरिरमा गरिने उपचारलाई क्षारकर्म भनिन्छ । यो शल्य शास्त्रीय उपचार अन्र्तगतको सानो प्रकृया हो । यसमा विकृत अथवा प्रभावित अंगमा क्षार द्रव्यको प्रयोगले उपचार गरिन्छ । शल्यतन्त्रमा क्षार कर्म लाई अनुशस्त्र अन्र्तगत राखिएको छ । शस्त्र र अनुशस्त्रहरु मध्ये क्षार सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ । सामान्यतया शस्त्रको प्रयोग गर्न अनुकुल नमिल्ने…
Dr. Sunayana Thapa
Reflexology भनेको एक किसिमको वैज्ञानिक उपचार पद्घती हो जसमा शरिरको विभिन्न अङ्ग जस्तै पैताला, हत्केला या कानमा रहेका चाप बिन्दुहरु Pressure Points मा स्पर्श या चापका माध्यमले ती बिन्दुहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने शरिरका अन्य भागमा रहेका रोगहरु निको पारिन्छ । उदाहरणका लागि Reflexology ले पैतालामा रहेको मुत्रथैली प्रतिनिधित्व गर्ने विन्दुमा दबाब पैदा गरि मूत्रथैलीको प्राकृतिक कार्यमा सहयोग गर्दछ । Reflexology कुनै पनि रोगको पहिचान या निर्मल पार्नको लागि प्रयुक्त हुँदैन । तर यस पद्घतिले चिकित्सा विज्ञानको उपचार प्रकृयामा अतिरिक्त पद्घतिको भूमिका भने अवश्य निर्वाह गर्दछ । मानसिक तनाव, दम, अर्बुद, मुटु रोग, मदुमेह, टाउको दुख्ने, पिनास, मृगौला रोग या महिनावारी गडबढ भएका बिरामीहरुको साधारण र स्वस्थ्य जीवनयापनमा Reflexology एक असल सहयोगी बन्न सक्छ । यसको महत्व एसिया र युरोपका विभिन्न भूभागमा एक रोग प्रतिरोधात्मक पद्घति तथा अतिरिक्त उपचार पद्घतिको रुपमा स्थापित छ । उदाहरणका लागि डेनमार्कका धेरै नगरपालिका तथा कम्पनीहरुले सन ९० को दशक देखिनै यस पद्घतिलाई आफ्ना कर्मचारीको कुशलताको लागि…
फिजियोथेरापी (भौतिक चिकित्सा) एक चिनारी
फिजीयो + थेरापी दुई अलग शब्द मिलेर फिजियोथरापी बनेको हुन्छ जसको अर्थ फिजियो अर्थात शरिर र थेरापी अर्थात उपचार मानिन्छ । सामान्य अर्थमा शारिरीक उपचारलाई फिजियोथेरापी भनिन्छ । फिजीयोथेरापी (भौतीक चिकित्सा) एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा हो । जसले शारिरीक क्षति, कमी कमजोरी र अपाङ्गतालाई कम गर्छ, साथै व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप सहज गर्दै गुणस्तरीय स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । ४६० BC मा हिप्पोक्रेट्स र ग्यालिनसले मसाज, manual therapy, hydrotherapy को सुरुवात गरेका थिए । समयको परिवर्तन सँगै भौतिक चिकित्साको रुपमा विर्कसित भयो । फिजीयोथेरापी विगत ४–५ वर्ष देखी हामी माझ अत्याधिक प्रभाभकारी र लोकप्रिय उपचार पद्घति बनेको छ । फिजियोथेरापीमा विभिन्न प्रकारका व्यायाम र विधुतिय उपकरणको प्रयोग गरेर धेरै प्रकारका विरामीहरुलाई पूर्ण उपचार गरिन्छ । शारिरीक तथा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिलाई सामान्य जीवन तर्फ फर्काउन भौतिक चिकित्साको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । फिजियोथेरापीका उपचार पद्घति उपचारात्मक व्यायाम (Therapeutic exercise) : विभिन्न प्रकारका व्यायाम द्वारा उपचार गरिन्छ । जस्तै Active व्यायाम, Passive…
स्वास्थ्यका लागि मालिस
Dr. Ram Mani Bandari
स्वास्थ्य रक्षाका लागि बिभिन्न उपचार पद्घतीहरु मध्ये मालिस पनि चचिर्त छ । मानव समुदाय र मालिसको उत्तिकै पुरानो इतिहास रहेको छ । आज विश्वभर मालिस एक सजिलो उपचार पद्घतिको रुपमा विकसित भइरहेको छ । स्वास्थ्य र शारीरिक सुन्दरतको मुख्य साधन नै व्यायाम र मालिस भएकाले हर व्यक्ति यस पद्घतिप्रति आकर्षित छन् । मालिसको आधुनिक शब्द मसाज हो । यो शब्द अरबी मास्स बाट बनेको हो । जसको अर्थ मांशपेशीलाई हातले दबाउने र जोर्नीमा मालिस गर्ने कला भन्ने बुझिन्छ । आयुर्वेद शास्त्र अनुसार मालिसलाई अभ्यङ्ग भनिन्छ । स्वस्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ रक्षा र रोगी व्यक्तिको रोग निरुपण गर्नु आयुर्वेद चिकित्साको मुख्य उदेश्य हुन । स्वस्थ्य एवं रोगी दुबै प्रकारका व्यक्तिका लागि मालिस लाभकारी हुन्छ । स्वस्थ्य रहनको लागि दिनचर्याको रुपमा मालिसलाई वर्णन गरिएको छ । संसारको सबैभन्दा पूरानो धर्मशास्त्र वेद वाङमयमा पनि मालिस विशेषताका साथ वणर््िात छ । आयुर्वेद शरिर शुद्घि चिकित्सा अन्र्तगत पञ्चकर्म चिकित्साको पूर्वकर्मको रुपमा पनि मालिसलाई मुख्य उपचारको रुपमा…